Canton Fair က တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် တံခါးဖွင့်စီးပွားရေး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာအသစ်များအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြနေ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် Canton Fair ဟု လူသိများသော တရုတ် သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် ပြပွဲသို့ လာရောက်လေ့လာသူများအား အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကွမ်ကျိုး၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက ယခုကျင်းပလျက်ရှိသော တရုတ် သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ သို့မဟုတ် Canton Fair တွင် တံခါးဖွင့်ဝါဒအား ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ အားပေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ဆန္ဒပြင်းပြမှုကို ကာလရှည်ကြာလိုက်နာနေကြောင်း ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပြပွဲက ထုတ်ကုန်သစ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းသစ်များဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအား ဆွဲဆောင်ထားလျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် Canton Fair ဟု လူသိများသော တရုတ် သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် ပြပွဲအတွင်း ကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှ ဝယ်သူများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီသော တစ်ခါသုံးပိုက်များအကြောင်း ပြခန်းပြသသူတစ်ဦး (ဝဲ) က ရှင်းပြနေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ကတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် Canton Fair ဟု လူသိများသော တရုတ် သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် ပြပွဲအတွင်း လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအကြောင်း ရှင်းပြနေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပထမဆုံးအဖြစ် အွန်လိုင်းနှင့်ရော အော့ဖ်လိုင်း (offline) ဖြင့်ပါ ကျင်းပလျက်ရှိသော အဆိုပါ ပြပွဲသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၈,၀၀၀ ခန့် ဆွဲဆောင်ထားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် မြို့တော် ကွမ်ကျိုးရှိ ပြပွဲစင်တာ၌ ပြခန်းပေါင်း ၂၀,၀၀၀ နီးပါး ထည့်သွင်းပြသလျက်ရှိသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ငါးရက်ကြာပြုလုပ်သော အွန်လိုင်းပြပွဲတွင်မူ ကုမ္ပဏီများစွာ ချိတ်ဆက်ပါဝင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်တွင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီကြီး Gree ၏ ပြခန်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ နောက်ဆုံးပေါ် “ကာဗွန်ကင်းစင်သော ဂေဟစနစ်” ကို မိတ်ဆက်ရန်အတွက် လူအများစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ လျှပ်စစ်မီးအားသွင်းရန်မလိုဘဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုဘက်ထရီဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းက လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ယူနစ်များစွာနှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း၊ ယင်းမှာ ကာဗွန်ကိုလုံးဝဥဿုံလျှော့ချရေး ဦးတည်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“ဥရောပနှင့် အမေရိက နိုင်ငံများဟာ အပူဓာတ်ရရှိဖို့ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ Gree ရဲ့ ဂေဟစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက အနည်းဆုံးကာဗွန်လျှော့ချရေး လိုအပ်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်များစွာက ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆလောက် ရောင်းချတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်” ဟု Gree Electric Appliances ၏ president assistant ဖြစ်သူ Kevin Bai က ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ကျူးဟိုင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်အတူ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံး အိမ်သုံးလျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် တိုးတက်လာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ၎င်း၏လက်တံများအား ဆန့်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သဖြင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် ပြင်းထန်သောပြိုင်ဆိုင်မှုကြားမှ တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ တရုတ် စက်ရုံအများစုသည် အဓိကနည်းပညာများနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်များကို ပုံဖော်ရန် ထုတ်လုပ်ရုံမျှသာရှိရာမှ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ကို သိရှိခဲ့ကြောင်း Bai က ပြောခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံစုံပါဝင်သော လက်လီရောင်းချသောအုပ်စု၏ sourcing director ဖြစ်သော Anne Casso က Bai နှင့် သဘောဆန္ဒတူညီကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ၎င်းပြပွဲအား ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူများ ပြောင်းလဲလာခြင်း၏ သက်သေအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
“အရင်ကတော့ ကျွန်မတို့ လာပြီး ဘာလိုအပ်လဲ ရှာလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့ အများအားဖြင့် ဘာများအသစ်တွေ့ရမလဲဆိုပြီး ကျွန်မတို့ လာကြတယ်လေ။ တရုတ်နိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူတွေက စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်နဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ထုတ်ကုန်သစ်စုစည်းမှုတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းထူထောင်နေပါတယ်” ဟု Casso က ပြောခဲ့သည်။
Auchan Retail ၏ sourcing team က ယခုနှစ်တွင် 5G နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဂေဟစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ခေတ်မီအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှု မြင့်မားလာခြင်းသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီများက တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသော စိတ်ကူးများနှင့် ကြံ့ခိုင်သောထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်များရှိသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူများနှင့် ကိုက်ညီသွားခြင်းဖြစ်မည်ဟု Casso က ယုံကြည်ထားသည်။
တရုတ် ပြည်တွင်းအိမ်တွင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ Galanz အတွက်မူ တစ်နှစ်လျှင် နွေဦးရာသီနှင့် ဆောင်းဦးရာသီ၌ နှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့သော Canton Fair ၏ လက်ရှိပြုလုပ်နေသော ပြပွဲသည် ယခင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းနှင့် နည်းလမ်းများစွာကွဲပြားလျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ခင်းကျင်းပြသထားသော ထုတ်ကုန်များမှာ ပြည်ပဝယ်ယူသူများကိုသာမက ပြည်တွင်းဝယ်သူများအတွက်ပါ ရည်မှန်းထားကြောင်း၊ ပြပွဲသို့ ပြည်ပ ဖောက်သည်များရော ပြည်တွင်းဝယ်ယူသူများကိုပါ ဖိတ်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ပြပွဲတွင် ဝင်ရောက်ပြသသော အစောပိုင်း ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအနက် တစ်ခုဖြစ်သော Galanz သည် ပြည်ပဈေးကွက်တွင် အခြေချရန် ဤပလက်ဖောင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ပုံစံနှစ်မျိုးလည်ပတ်မှု” ဆိုတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစံနှုန်း၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကုန်တံဆိပ်ကို ကမ္ဘာနဲ့ချီ ပိုပြီးမြှင့်တင်နေသလို ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာလည်း အဲဒါကိုပြန်ပြီး ပုံဖော်နေရပါတယ်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပိုင်းခြားမှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် ဆန်းသစ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေ ပိုမိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Galanz Group ဥက္ကဋ္ဌ Liang Zhaoxian က ပြောခဲ့သည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သော ယင်းပြပွဲသည် တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု၏ အရေးပါသောလက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ “Canton Fair, Global Share” ဟု အမည်ပေးထားသော Canton Fair ၏ ယခုပြပွဲသည် တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်တွင်းဈေးကွက်အား အဓိကအဖြစ်ထားရှိကာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက်များ အပြန်အလှန် အားပေးလျက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစံနှုန်းသစ်တည်ဆောက်နေသဖြင့် “ပုံစံနှစ်မျိုးလည်ပတ်မှု” အဖြစ် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။
အွန်လိုင်းပြပွဲများက မှာကြားမှုအသစ်များ ရှာဖွေရန် သွင်းကုန်ဦးစားပေးကုမ္ပဏီများအတွက် ကမ္ဘာ့ဝယ်လက်များကို ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် ရည်မှန်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အော့ဖ်လိုင်း (offline) ပြပွဲများကမူ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပဝယ်သူများကို ဖိတ်ကြားပြီး တရုတ် ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအား ဈေးကွက်သစ်များ ဖော်ထုတ်ရန် အထောက်အကူပြုစေကြောင်း ပြပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်သူများအနက် တစ်ဦးဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးစင်တာ အကြီးအကဲ Chu Shijia က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီပြပွဲက သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ တည်ဆောက်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြသနေတဲ့ ဒီပြပွဲကနေ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ နှစ်ခုလုံးရဲ့ ဈေးကွက်တွေနဲ့ အရင်းအမြစ် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနေပါတယ်” ဟု Chu က ဆိုသည်။
ဖက်ရှင်ကျပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် လူသိများသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်လီရောင်းချသူ MINISO သည် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၉၉ ခုတွင် စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၄,၅၀၀ လည်ပတ်နေပါသည်။ ကွမ်ကျိုးအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီသည်လည်း ပထမဆုံးဝယ်သူအဖြစ် ယခုပြပွဲသို့ တက်ရောက်လာခဲ့သည်။
“စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ အခွင့်အလမ်းသစ်အရှိန်အဟုန်က ပြည်တွင်းရော ပြည်ပဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတစ်ဆင့် လည်ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု MINISO တည်ထောင်သူ Ye Guofu က ပြောခဲ့သည်။
၎င်း၏ကုမ္ပဏီသည် အမျိုးအမယ်အသစ်တွေအတွက် အရေးပါသော အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပြပွဲမှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ပလက်ဖောင်းကို တန်ဖိုးထားကြောင်း Ye က ဆိုသည်။ (Xinhua)
GUANGZHOU, Oct. 17 (Xinhua) — China is demonstrating its long-lasting pursuit of innovation, inspiration, and willingness for higher-level opening up at the ongoing China Import and Export Fair, or the Canton Fair, which has grabbed the world’s attention with new products and new paths of development.
1- People visit the 130th session of the China Import and Export Fair, also known as the Canton Fair in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 15, 2021. (Xinhua/Liu Dawei)
2- An exhibitor (L) talks over environmentally-friendly straws with Kazakh buyers during the 130th session of the China Import and Export Fair, also known as the Canton Fair in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 15, 2021. (Xinhua/Liu Dawei)
3- Exhibitors talk over electrical appliances during the 130th session of the China Import and Export Fair, also known as the Canton Fair in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 15, 2021. (Xinhua/Liu Dawei)